Ukusebenzisa imicelimngeni kaYouTube ukunyusa umjongi wakho kunye nenani lababhalisile-YTpals
Ukusebenzisa imingeni kaYouTube ukunyusa ababukeli bakho kunye nenani lababhalisile
Khumbula umceli mngeni webhakethi yomkhenkce kunye nendlela eya kwintsholongwane kwimidiya yoluntu? Ngomnye wemizekelo emininzi yeevidiyo eziyimpumelelo esekwe kumngeni ezenze amaza kule minyaka yakutsha nje. Iividiyo zomngeni nazo ziye zavela njengendlela edumileyo yabadali bomxholo weYouTube ukonyusa amanani abo ababukeli kunye nababhalisi. Ukuba uqale itshaneli lakho likaYouTube mva nje kwaye unomdla wokwazi ukuba ungayisebenzisa njani imiceli mngeni yeYouTube ukusa isitishi sakho kwindlela eya empumelelweni, qhubeka funda.
1. Khetha imingeni efanelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla
Imiceli mngeni oyikhethayo ekwenzeni umxholo weYouTube akufunekanga ibandakanye ukwenza izinto ezifuna ukuba uphume endleleni yakho. Ngamafutshane, imiceli mngeni ifanele ibe nento yokwenza nobomi bakho bemihla ngemihla. Umzekelo, unokuzama imveliso ye-skincare ukubonisa iziphumo zayo kubabukeli kangangenyanga. Xa ukhetha umngeni, qiniseka ukuba uyawenza ngaphandle kokuthatha nantoni na ebomini bakho.
2. Yenza ishedyuli yokufota
Ngaphandle kweshedyuli yokufota onokuthi unamathele kuyo, iividiyo zakho ezicela umngeni kwiYouTube zinamathuba amancinci okuba zenziwe kakuhle. Ke, ngaphambi kokuba uqalise ukwenza ifilimu, qiniseka ukuba unayo ishedyuli yokufota. Kufuneka uqinisekise ukuba unamathela kwisicwangciso nokuba yintoni na eza ebomini bakho. Kuya kunceda ukuba unombono othile wokuba ividiyo yakho iya kuba njani na ngaphambi kokuba uye ezantsi ukufota. Dibanisa oku kunye nesicwangciso sobuchule, kwaye uya kuba nalo lonke ithuba lokudala ividiyo oyifumanayo ukujonga kwi-YouTube.
3. Yenza ifilimu imingeni emininzi ngexesha lomxholo ongaphezulu
Umxholo weYouTube osekwe kumngeni udla ngokuba mfutshane kwaye uthe ngqo, kwaye ukuba wenze ishedyuli yokufota, ayizukuthatha ixesha elininzi ukurekhoda umxholo onjalo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubona nayiphi na impumelelo iza ngendlela yakho kwiividiyo ezisekelwe kumngeni, kufuneka unike abaphulaphuli bakho umxholo omninzi. Eyona ndlela ilungileyo yokwenza oku kukufota imiceli mngeni emininzi ngexesha. Nantsi indlela esebenza ngayo – khetha umngeni othile wokwenza ifilimu ngoSuku loku-1 kwaye ukhethe omnye oza kuwenza ngoMhla wesi-2. Ukuba ukulungele oko, ungade ukhethe umceli mngeni owahluke ngokupheleleyo kuSuku lwesi-3.
4. Fumana inkuthazo evela kubadali bomxholo abafanayo
Okwangoku, kukho amakhulu kunye namawakawaka abadali bomxholo weYouTube abenza umxholo osekwe kumngeni. Musa ukoyika ukuthatha amagqabi ambalwa kwiincwadi zabo. Ukujonga umxholo onje kaYouTube kuya kwandisa umbono wakho malunga neentlobo zemingeni onokuthi uyizame. Uya kukwazi kwakhona ukuchonga iintlobo zemingeni ongafanele uzame, nto leyo eya kukugcinela uvavanyo oluninzi kunye neempazamo ekuhambeni kwexesha.
5. Hlala unxibelelana neentsingiselo
Rhoqo ngonyaka, imiceli mngeni ethile, oko kukuthi, iividiyo zale mingeni, kusenokwenzeka ukuba zihambe zintsholongwane. Ngo-2022, ezinye zeembono zomngeni zibandakanya umngeni othi 'Asizozandla zam', 'Yoga', kunye 'nemizuzwana esi-7'. Ukuba ubhidekile malunga nokuba zeziphi na iintlobo zemingeni onokuthi uzame, ungoyiki ukukhangela ulwazi kwi-intanethi. Ezinye iibhlog ezingabalekiyo kunye namanqaku aya kukunceda uqonde iindlela kunye nezona ndlela zilungileyo zokusebenzisa ukwenza umxholo obulalayo oza kukufumana imithwalo yokuthandwa kweYouTube simahla.
Ngaphandle kokusebenzisa imiceli mngeni yeYouTube ukonyusa umrhumo wakho kunye nenani lababukeli, kuya kufuneka uqwalasele iinkonzo ezinjengeYTpals. I-YTpals yinkonzo elungele abadali bomxholo omtsha kaYouTube ukuba baqalise umsebenzi wabo wokudala umxholo. NgeYTpals, ungathenga Ababhalisile be-YouTube, iimbono, ukuthanda, kunye nokunye ukwenza isitishi sakho sikaYouTube sisebenze ngezona ndlela zinemivuzo.
Ukusebenzisa imingeni kaYouTube ukunyusa ababukeli bakho kunye nenani lababhalisile ngababhali beYTpals, 28 January 2022
Yonke into ubufuna ukuyazi malunga ne-Youtube Super Chats kunye ne-Super Stickers
Ihlabathi lokuyila umxholo liyanda ngesantya esingazange sabonwa ngaphambili. Ngokhuphiswano olwandayo, abadali ngabanye bafuna umxholo ongaphezulu wokwenza imali. I-YouTube ngokungathandabuzekiyo lelona qonga likhethwayo lokwenza imali lomxholo ngokwahlukileyo…
Konke Odinga Ukukwazi malunga nokunyuka kweNyanga yoBhaliso kwi-YouTube
Ukusukela ngoMeyi 2019, abantu babukele ngaphezulu kwe-250 yezigidi zeeyure zomxholo we-YouTube kwizikrini zeTV mihla le. Eli nani lisenokuba lenyukile ukusukela oko iGoogle kaGoogle ibonakala ngokuvela ngokuxhuma kunye nemida. Phakathi…
Ukusukela oko yasungulwa ngo-2005, iYouTube iye yaba yeyona ndlela isetyenziswa kakhulu ekusingatheni ividiyo kwi-intanethi. Ukusukela ngo-2020, kukho malunga ne-2.1 yeebhiliyoni zabantu kwihlabathi liphela abasebenzisa uYouTube. Yintoni eyaqala njenge…